Ciidanka Soomaaliya oo howlgalo ka sameeyay xaafado Muqdisho ka tirsan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ciidanka Soomaaliya oo howlgalo ka sameeyay xaafado Muqdisho ka tirsan
Ciidanka Soomaaliya oo howlgalo ka sameeyay xaafado Muqdisho ka tirsan
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgallo kala duwan ka sameeyeen Xaafado ka tirsan degmada Wartanabadda ee Magaalada Muqdisho.
Dad goobjoogayaal ah ayaa Warbaahinta u sheegay in Ciidamadu mararka qaar ay galayeen Guryaha si ay baaritaan ugu sameeyaan, halka ay baaritaan dheeri ah ku sameeynayeen dadka Shacabka ah ee waddooyinka maraya iyo kuwa ku sugan Goobaha Ganacsiga ee Degmada Warta-nabada.
Laaamaha Amniga dowladda Federaalka Soomaaliya weli wax faah faahin ah kama bixin ujeedka howlgalkii Xalay iyo waxyaabo lagu soo qabtay, hayeeshee dhowr jeer oo hore ayaa xaafado ka tirsan Magaalada Muqdisho sidaan oo kale howlgallo looga fuliyay.
Howlgalkan ay xalay Ciidamada dowladda ka sameeyeen Xaafado ka tirsan degmada Wartanabadda ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli habeen kahor tiro madaafiic ah ay kusoo dhaceen xaafado u dhow Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho.
Next articleDHAGEYSO:Xisbiga muxaafidka Soomaaliland oo ku kala qaybsan guddoonka baarlamaanka